Coral Reef: ကျွန်မနှင့်ကောင်းကင်ပြာ
Posted by ဇွန်မိုးစက် | Posted on Thursday, October 03, 2013
ကောင်းကင်ပြာသည် ကျွန်မအတွက် အဆုံးမသတ်နိုင်သော ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဖြစ်သည်၊ အပြီးသတ်ရေးဖွဲ့ဖို့ ခဲယဉ်းသည့် ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
အဲ့သည် ပြာလွင်သော ကောင်းကင်ထက်မှာ ကြိုတင်မမြင်နိုင်သော ကျွန်မ၏အနာဂတ်ရှိသည်၊ ကြိုးစားပြီးမေ့ပစ်သော အတိတ်၏အရိပ်တချို့ရှိသည်။ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာတော့ အနားသတ်မဲ့သော ကောင်းကင်ပြာကို ကျွန်မ ရပ်ကြည့်မျှော်ငေးနေမိသည်။
ကောင်းကင်ပြာကို ဘယ်အရွယ်ကတည်းက စတင်နှစ်ခြိုက်သဘောကျခဲ့မှန်း အတိအကျ မမှတ်မိတော့သော်လည်း ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာခံစား တတ်သိနားလည်ချိန်မှစပြီး မီးရထား၊ ကား၊ သင်္ဘောများနှင့် ခရီးသွားခွင့်ကြုံသည့်အခါတိုင်း လမ်းတလျှောက်လုံး ကောင်းကင်ပြာနှင့် ဖြူလွလွတိမ်တိုက်တွေကိုပဲ ကျွန်မ မရိုးနိုင်စွာ မျက်စိတဆုံး လိုက်ကြည့်မိတတ်သည်။ စိတ်ကူးအတွေးတွေ ဖြန့်ကျက်မိတတ်သည်။ ကျွန်မအတွက်တော့ ကောင်းကင်ပြာက စိတ်ကူးပင်လယ်နှင့်တူပြီး တိမ်စိုင်တိမ်လိပ်ဖြူတွေကတော့ ထိုအတွေးစိတ်ကူးများကို နီးစပ်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ထပ်ဆင့်အတောင်တပ်၊ ရွက်လွှင့်ပေးသည့် စိတ်ကူးလှေနှင့်တူပါသည်။ တိမ်တိုက်ဖြူကိုစီးပြီး ကျွန်မ ကမ္ဘာတစ်လွှားလျှောက်သွားနိုင်သည်။ မျက်စိဖြင့် တပ်အပ်မမြင်နိုင်သော ကောင်းကင်ပြာထက်က နတ်ဘုံနတ်နန်းသို့လည်း ရောက်ရှိ ခရီးနှင်နိုင်သည်။ ကောင်းကင်ပြာနှင့် ဖြူဖွေးသောတိမ်တောင်တို့ကို မြင်ရသည့်အခါတိုင်း ကလေးဘ၀ကလိုပင် စိတ်ကူးတည့်ရာ လျှောက်တွေးသည့်နောက်ကို ကျွန်မ အတားအဆီးမရှိ လိုက်သွားချင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်ပြာသည် ကျွန်မ၏ စိတ်အတွေးအာရုံများကို တဒင်္ဂအားဖြင့် ရပ်တန့်မိန်းမောစေနိုင်သည့် အစွမ်းသတ္တိရှိကြောင်း လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်မ ပိုသိလာရသည်။ ကျွန်မစာကြည့်နေရင်း ညာဘက်ပြတင်းမှ ကြည်စင်သော ကောင်းကင်ပြာကို မြင်ရလျှင် စာဆက်မကြည့်နိုင်ဘဲ တခဏလောက်တော့ ငြိမ်သက်သွားရမြဲဖြစ်သည်။ ကျောင်းအသွားလမ်းမှာ ကောင်းကင်ပြာကို တမေ့တမောကြည့်ရင်း လမ်းလျှောက်မိသည့်အတွက် တစ်ကြိမ်မက ခလုပ်တိုက်မိတတ်သည်။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ စာဖတ်နေရင်း မှန်ပြတင်းမှ ပြာလဲ့နေသော ကောင်းကင်ကို လှမ်းမြင်ရလျှင် ဖတ်လက်စစာအုပ်ကိုချပြီး ဝေဟင်မှာ ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်များနှင့် ကောင်းကင်ပြာထဲ မိနစ်အနည်းငယ် လွင့်မျောတိုးဝင်မိပြန်သည်။
တစ်ခါက အဝေးပြေးကားနှင့် သုံးနာရီကြာ သွားရမည့် ခရီးတစ်ခုမှာ လမ်းတစ်လျှောက်ဖတ်ရန် ကျူတိုရီရယ်နှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါး ဆယ်စောင်လောက် ကျွန်မ ယူသွားခဲ့သည်။ တကယ်တမ်း အသွားအပြန် စုစုပေါင်း ခြောက်နာရီခရီးမှာ ကျွန်မ ဆောင်းပါးတစ်စောင်သာ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်လုံးနီးပါး ကျယ်ပြောပြာလွင်သည့် ကောင်းကင်ကို တငေးတမောကြည့်ရင်း ကျွန်မလိုက်ပါသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တလောကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရန် အိမ်နှင့် မဝေးလှသော ကမ်းခြေသို့ သွားဖြစ်သည့်အခါ ပြာလွင်တည်ငြိမ်သောကောင်းကင်ပြင်ကိုသာ ငေးမော့ကြည့်သောအချိန်များခဲ့သဖြင့် ပင်လယ်ရေနှင့်ထိတွေ့ဖို့ပင် ကျွန်မမေ့လျော့သွားခဲ့သည်။ ကင်မရာထဲမှ ပုံရိပ်များ ကွန်ပျူတာထဲသို့ ပြောင်းထည့်သည့်အခါ ကျွန်မရိုက်ယူခဲ့သော ပုံအတော်များများမှာ ကောင်းကင်ပြာတို့၏ ပုံရိပ်များဖြစ်နေကြောင်း ကျွန်မ အံ့သြစွာ တွေ့ရှိသိလိုက်ရပြန်သည်။
တခါတရံ ကောင်းကင်ပြာအောက်က ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း စိတ်အားငယ်မိသည့်အခါ၊ ခွဲခွာပေးဆပ်ခဲ့သော အရာများနှင့် ကျွန်မ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်တို့ မှန်ကန်ထိုက်တန်ရဲ့လားဟု အတွေးဝင်မိသည့်အခါ ကျွန်မတွေဝေသွားခဲ့သော်လည်း ပြာလဲ့သောကောင်းကင်ကို မြင်ရသည့်တခဏမှာတော့ ထိုအတွေးတို့ေ၀၀ါးလွင့်ပြယ်သွားခဲ့ပါသည်။
အခိုက်အတန့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့ပေမယ့် ကြည့်လိုက်တိုင်း ကျွန်မချစ်သော ကောင်းကင်ပြာကို အမြဲတစေ ကြည်ကြည်စင်စင် မြင်ရသော နေရာတစ်ခုမှာ ရောက်ရှိနေသည့်အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကျေနပ်မိကြောင်း ကျွန်မ၀န်ခံပါသည်။
ပြာလွင်ကြည်စင်သော ကောင်းကင်ကို လှမ်းမော့ကြည့်ရင်း မြန်မာပြည်မှာ ရှိစဉ်တုန်းက ကြည့်ဖူးသော ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုက ကျွန်မအတွေးထဲ ဖျတ်ခနဲ ၀င်လာခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀မှာကွဲကွာပြီး အတန်ကြာမှ ပြန်လည်တွေ့ဆုံသော အဖေနှင့်သမီးကြားက အဆင်မချောလှသော ဆက်ဆံရေး၊ အဖုအထစ်၊ အဖြစ်အပျက်တို့ကို မိဘမေတ္တာနှင့်ယှဉ်ပြီး ရိုက်ပြသွားသော အခန်းဆက်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။ သမီးဖြစ်သူက ၀မ်းနည်းသည့်အခါတိုင်း ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်တတ်သော အကျင့်ရှိသည်။ အဲသည်လိုမော့ကြည့်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့သူမှာ ဖခင်ဖြစ်ကြောင်း အစောပိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု၏အဆုံးမှာ လှပစွာ ပြသသွားခဲ့သည်ကို ကျွန်မ မှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် တရားဝင်လမ်းခွဲသည့်နေ့မှာ ငိုရှိုက်နေသည့်သမီးငယ်ကို အားမငယ်ဖို့၊ ၀မ်းနည်းမျက်ရည်ကျမိသည့်အခါ ကောင်းကင်ပြာကို မော့ကြည့်အားတင်းဖို့ ဖခင်က မှာကြားသွားခဲ့သည်။
ကောင်းကင်ပြာကြောင့် ကျွန်မစိတ်တွေ ကြည်နူးရသည်။ ကျွန်မအတွေးတွေ လွင့်မျောပျံသန်းခွင့်ရသည်။
ကောင်းကင်ပြာကြောင့်ပင် ကျွန်မ စာတစ်ပုဒ်ရေးဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပြီးတော့… ကောင်းကင်ပြာကို မော့ကြည့်ပြီး ကျွန်မ၏ မျက်ရည်များကို သိမ်းဆည်းတတ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ညိုလေးနေ said on October 4, 2013 at 7:46 AM
Love this post dear !
ဇွန်မိုးစက် said on October 5, 2013 at 7:24 AM
Thanks, my dear! Love your poem too. :)
mstint said on October 5, 2013 at 8:26 AM
ဇွန်ရေ...အဆုံးမဲ့ ကောင်းကင်ပြာလေးက အသက်ဝင်နေတယ်...တွေဝေအားငယ်စိတ်တွေအားလုံး ကောင်းကင်ပြာလေးမှ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါစေလို့...
ဇွန်မိုးစက် said on October 5, 2013 at 8:13 PM
ကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ။း)
Anonymous said on October 5, 2013 at 10:32 PM
ဇွန်မိုးစက် said on October 6, 2013 at 12:41 PM
အင်း... ညအချိန်မှာတော့ နက်ပြာရောင်ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ပြီး ကြယ်တွေကို ရေတွက်ခဲ့ဖူးတယ်။
Anonymous said on October 8, 2013 at 2:18 PM
သူသူ မော့ကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်း ကောင်းကင်က ပြာမနေဘူး မမဇွန်ရယ်....
တစ်ခါတလေ သူက အားအင်သိပ်ပေးတယ်
အုပ်မိုးထားတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ :)
ဇွန်မိုးစက် said on October 8, 2013 at 7:43 PM
မဇွန်အတွက်တော့ ကောင်းကင်ပြာက သောကတွေဖြေလျော့ပေးတယ် သူသူ။း)